Mkpokọta Maapụ - maapụ dị ịrịba ama bụ akụkụ dị oke mkpa nke ibe ahụ ma ha gosipụta azụmaahịa, ọkwa ha, yana ozi ndị ọzọ. A na-ekpebi nhazi na ngalaba a site na nyocha azụmaahịa, nyocha, na ọrụ na ibipụta ya na peeji nke Google Business ha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ maka ọrụ mpaghara ma ọ bụ na-ere ahịa mkpọsa, nyocha dị oke mkpa na mbọ ị na-agba n'ịntanetị Ọbụghị naanị na nzaghachi dị mma iji meziwanye azụmahịa gị, ịkwado nyocha ndị pụtara ìhè ga-adọta ọtụtụ ndị ahịa. Ọ bụrụ na ịnweghị ụzọ iji chịkọta nyocha, ị kwesịrị ịdenye aha na ọrụ dịka Ezi nyocha.
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Ezi nyocha na iji njikọ njikọta m na ederede ahụ.
Tags: Oge Acuitynnukwu nyochaa arịrịọna-anakọta nyochanzaghachi ndị ahịanyocha emailGoCanvasNdi ana-akpo GoogleOkwute GoogleỤlọ ụlọ ProokpokoroOnye ọrụOdumegwu Ojukwumailchimpmkpọ mapnyocha ndị na-adịghị mmaNyocha banyere ntanetịEzigbo ụlọ WebmastersNyochaServicelọ ọrụOge akara akasms nyochasquarenyochanyochaa eziokwu